OTU ESI TINYE GBAKWUNYE NA SONY VEGAS - SONY VEGAS - 2019
Isi Sony vegas
Kedu ka esi gbakwunye utịp na Sony Vegas?
Kedu ụdị nke na-enweghị mmetụta pụrụ iche? Na Sony Vegas enwere ọtụtụ ihe dị iche iche maka vidiyo na ọdịyo. Mana ọ bụghị onye ọ bụla maara ebe ha bụ na otu esi eji ha. Ka anyị lee otú Sony Vegas si weta mmetụta na ndekọ ahụ?
Kedu ka esi tinye mmetụta na Sony Vegas?
1. Mbụ, bulite vidiyo na Sony Vegas na ịchọrọ itinye mmetụta na. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye mmetụta dị na ibe ụfọdụ nke faịlụ vidiyo ahụ, wepụ ya na vidiyo site na iji "S" igodo. Ugbu a pịa bọtịnụ "Omume pụrụ iche" na mkpirisi achọrọ.
2. Na windo nke mepee, ị ga-ahụ nnukwu ndepụta nke mmetụta dị iche iche. Ị nwere ike ma ọ bụ n'ime ha ma ọ bụ ọtụtụ n'otu oge.
N'ụzọ yiri nke ahụ, ị ​​nwere ike itinye mmetụta ọ bụghị naanị maka vidio, kamakwa maka ọdịda egwu.
3. Enwere ike ịmegharị ọ bụla na-amasị gị. Dịka ọmụmaatụ, họrọ "Mgbali" mmetụta. Na window nke meghere, ị nwere ike ịtọ ntọala nke mmetụta ahụ ma lelee otú vidiyo si gbanwee na windo ihuenyo.
Ya mere anyị chepụtara otu esi etinye mmetụta na vidiyo site na iji Sony Vegas. Site n'enyemaka nke mmetụta ị nwere ike ịmegharị vidiyo ahụ, mee ka ọ na-enwupụta ma na-adọta mmasị nke ndị na-ekiri ya. Isi ihe ọ bụghị iji dochie ya!
https://termotools.com ig.termotools.com © Sony vegas 2019